हे भगवान् के भयो यस्तो ! अस्पतालको सानो गल्तीले मृ,त शिशुको जन्म, किन चिकित्सक यसरी चुक्छन् बेला बेलामा ? – Gazabkonews
हे भगवान् के भयो यस्तो ! अस्पतालको सानो गल्तीले मृ,त शिशुको जन्म, किन चिकित्सक यसरी चुक्छन् बेला बेलामा ?
अ,चेत अवस्थाबाट होस खुल्दा आफूले मृ,त शिशु जन्म दिएको खबर पाएर एक अस्ट्रेलियाली महिला निकै दुःखी बनेकी छन् । वेस्ट अस्ट्रेलियाका बन्बरी शहरस्थित एउटा निजी अस्पतालको गल्तीका कारण उनले सो दुःख भोग्नुपरेको हो । बच्चा जन्माउँदा पी,डा नहोस् भन्ने हिसाबले ती महिलालाई १० मिलिग्रामको मोर्फिन दिन चिकित्सकले सिफारिस गरेका थिए ।
तर, गल्तीवश उनलाई १० गुणा बढी अर्थात् १ सय मिलिग्रामको मोर्फिन दिइँदा उनको कोखको बच्चाको समेत ज्या,न गएको बताइएको छ । ‘साराह हस्सन’ नामक ती महिला आफ्ना पति सन्नी एलमसँग सामान्य ग,र्भावस्थामा स्वस्थ शिशु जन्माउन सो अस्पतालमा पुगेकी थिइन् । मोर्फिन ओ,भरडो,जकै कारण साराह अचेत अवस्थामा पुगेकी थिइन् । फलस्वरूप उनलाई सघन उपचार कक्षमा राखिनुपरेको थियो ।नेपालसमचारपत्रमा खबर छ ।
गत १० डिसेम्बरमा सेन्ट जोह्न अफ गड हस्पिटलमा यो घ,टना घटेको थियो । तर, हालसम्म पनि हस्सन दम्पतीले यस घ,टनाले आफूहरूको जीवनभरि आघात पुगेको बताउँदै आएका छन् । अस्पताल र चिकित्सकहरूले आफूहरूको सानो गल्तीले गर्दा यसमा ठूलो मानवीय त्रुटि भएको तथ्य स्विकारिसकेका छन् ।
यो पनि : प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट : वाग्मती र आर्मी विजयी
यो पनि : परिवारको आशा नै अस्पतालको श,य्यामा ढ,लेपछि…
यो पनि : यि बिधी अपनाएर सूर्यदेवको पूजा गरे परिवारमा मिल्छ शान्ति, आर्जन गर्न सकिन्छ मनग्य धन सम्पत्ती
यी हुन नेपालसंग साइनो जोडिएका आधा दर्जन भारतीय चर्चित कलाकारहरु, जसले भारतमा स्टार नै बनेर राम्रो चर्चा पाइरहेका छन्, खुशी हुँदै नेपाल र नेपालीबारे यसो भन्छन्, सबै नेपाल आइसकेका छन् र यसकारण फेरी पनि आउन चाहान्छन्
नेपालसंग साइनो रहेका भारतीय चर्चित कलाकारहरु हेर्नुहोस ! बलियुड कलाकार हरु जुन भारत का भएता पनि नेपालसंग साइनो रहेका कलाकार हरु को बारेमा चर्चा गर्दै छौ ! नेपालीहरु लाई भारतीय कलाकार अर्थात बलियुड का कलाकार हरु धेरै नै मन पर्दछ बलियुड कलाकार हरुका नेपाल मा पनि धेरै फ्यान हरु रहेका छन् !
यो पनि : नेपालीहरुको बलिउडप्रतिको सम्बन्ध
काभ्रेपलाञ्चोक, ५ पुस (रासस) ः दक्षिण एशियामै नमूना बनाउने उद्देश्यले काभ्रेपलाञ्चोकमा निर्मित सूचना–प्रविधि पार्क (आइटी पार्क) सेक्यूरिटी प्रिन्टिङ प्रेस (सुरक्षण मुद्रण केन्द्रम)मा परिणत हुँदैछ । यसका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काममा थप प्रक्रिया थालिएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले जनाएको छ । पनौती नगरपालिका–५ स्थित उक्त पार्कमा सरकारले गत वर्ष प्रेस राख्ने निर्णय गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधारको काम थाल्न आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा रु एक अर्ब नौ करोड बजेट विनियोजन भई कामको शुरुआत गरिएको हो । प्रारम्भिक चरणमा करिब रु ३३ अर्बमा निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना बनाइएको केन्द्र निर्माण सम्पन्न गर्न क्रमागत बजेट विनियोजन गरिने जनाइएको छ ।